अन्ततः यसकारण प्रधानमन्त्री बाट हट्दै ओली – Dainik Samchar
March 19, 2021 115
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केही दिनभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसरत भइरहेको छ । ओलीले नेपाली काँग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग नाटकीय सहमति गरेबाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै ल्याउने तयारी भएको छ ।
काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्न तयार भएको मात्रै बताएको छ । उसले कुन–कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।
Prevएउटा ग्यास सिलिन्डरको मूल्य आठ हजार
Nextनेपाल पक्षमा रहेकी यि सांसद झुक्किएर ओलीसंग पुगेपछि….
तपाइले यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई !
पेलेरै जान खोजेका ओलीले, माधव-खनाल समुह विरुद्ध उठाउँदै छन् यस्तो खतरनाक कदम
माघे संक्रान्तिको देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरु लाई शुभकामना ?❤️ (1406)